१३ वर्ष अघी प्रधानमन्त्रीलाई मि’र्गौला दान गरेकी महिलाको यस्तो छ, द’र्दनाक व्य’था – Life Nepali
१३ वर्ष अघी प्रधानमन्त्रीलाई मि’र्गौला दान गरेकी महिलाको यस्तो छ, द’र्दनाक व्य’था
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली १३ वर्षअघि भारतमा प्रत्यारोपित मृ’गौला ‘फे’र्न विदेश जाने तयारीमा हुनुहुन्छ । तर, उहाँलाई आफ्नो मृ’गौला दिने उपकारी बुहारीका बाबुको व्यथा बेग्लै छ । आफ्नो मृ’गौला दिने भाइबुहारीका पिताजी अहिले आफै सोही स’मस्याबाट ग्र’स्त बन्नु भएको छ । नाम हो, ध्रुव घिमिरे, चितवनका पुराना एमाले नेता । प्रधानमन्त्रीका भाइ ताराकी पत्नी अञ्जना घिमिरेले १३ वर्षअघि आफ्नो एउटा मृगौला जेठाजुलाई दिएकी थिइन् । उनका बुबालाई पनि यही बिमारीले सताएको छ । तर, उनी आर्थिक सहयोगका लागि सरकार कहाँ नजाने पक्षमा छन् । आजको जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।
यीनै हुन् महान नारी जसले केपी ओलीलाई कि’ड्नी दिईन !
काठमाडौ, चितवनको घिमिरे परिवारकी छोरी अन्जन विवाहपछि झापाको ओली परिवारकी बुहारी बनिन् । आमाबाबुको काखमा सम्हालिएकी अन्जनको काँधमा तारा ओलीको घरबार सम्हाल्ने जिम्मेवारी थपियो । विस्तारै उनी ओली परिवारसँग घुलमिल हुँदै गइन् । ओली परिवार ठूलै थियो ।
केही समयपछि उपचारका लागि थाइल्यान्ड गएका उनका जेठाजु अर्थात् केपी शर्मा ओली घर फर्किए । एउटै परिवार भए पनि राजनीतिमा व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले केपीसँग उनको त्यति बाक्लो भेटघाट हुँदैनथियो । घर आएपछि अन्जन भेट्न गइन् । ढोगभेट पछि उनले सोधिन, ‘दाजुलाई के भएको ?’‘कि’ड्नीमा स’मस्या छ, निको भएन, केपीले भने । अन्जनको जि’ज्ञासा थपियो, ‘अब के गर्नुपर्छ ?’ ‘कि’ड्नी नै फे’र्नुपर्छ’ डाक्ट’रले दिएको राय केपीले सुनाए ।
कि’ड्नी दान गरेपछि मात्र प्र’त्यारोपण सम्भव छ भन्ने कुरा अन्जनलाई थाहा थियो । ओलीको अ’वस्था देखेपछि अन्जनलाई नमीठो लाग्यो । उनले फ्या’ट्टै भनिहालिन, म दिन्छु कि’ड्नी ।’ उनको कुरा सुनेर केपी बेस्स’री हाँ’सेछन् । भर्खर २१ वर्ष लागेकी अन्जान नातामा ओलीकी भाइबुहारी थिइन् । उमेरले भने छोरीजस्तै । केपीलाई लागेछ, उनी बच्चै छिन् ।
यो निर्णय हतारमा गर्नु हुँदैन । तर अन्जनले भने निर्णय गरिसकेकी थिइन् । उनको अठोट देखेर ओली ग’म्भीर भए । केपीले भने, ‘त्यसो भए तिम्रो बुवाआमालाई सोध न ।’ उनले चितवनमा रहेका बुवाआमालाई यसबारेमा कुरा गरिन् । एमालेको राजनीतिमा रहेका बुवा ध्रुव घिमिरे र आमा प्रशान्तले नाइँ भनेनन् । ‘राम्रो मा’न्छेलाई बचाउनु त राम्रो कुरा हो, बचाऊ भन्नुभयो’, अन्जनले भनिन, ‘त्यसले मेरो आ’त्मब’ल झ’न् ब’लियो बनाइदियो ।’
आफ्ना लागि त सबैले गर्छन, अरूका लागि केही गर्न सक्नु ठूलो कुरा हो यही मा’न्यता बोकिन अन्जनले । एसएलसीसम्मको अध्ययन गरेकी अन्जन भन्छिन, ‘मैले पढेर यस्तो कुरा जानेकी होइन, सानैदेखि मलाई अरूका लागि केही गरौँ भन्ने लाग्थ्यो ।’ १९ वर्ष लाग्दा नलाग्दै २०६० तिर विवाह गरेकी उनले दुई वर्षपछि छोरा अर्पणलाई जन्म दिइन् । ओलीलाई मि’र्गौला दान दिन्छु भन्ने निर्णय गरेको बेला अर्पण जम्मा १५ महिनाका थिए । ‘मैले मेरो जेठाजु भनेर दिएकी होइन’, उनले भनिन, ‘उहाँ देशकै लागि काम लाग्ने मा’न्छे स’म्झेर मैले दिएकी हुँ ।’ मि’र्गौला दिन्छु र लिन्छु भन्दैमा हुँदैन । त्यसका लागि सबै कुरा मिल्नुपर्ने हुन्छ ।
‘ओ’ नेगेटिभ र’गत समूह भएका केपीलाई ‘ओ’ पोजेटिभ भएकी अन्जनले दिन सक्ने कुरा राष्ट्रिय मि’र्गौला केन्द्रको जाँचले देखायो । नेपालमा प्रत्यारोपणको सुविधा त्यसबेला थिएन । पहिले संविधानसभाको निर्वाचनको चर्चा चल्दै थियो । ओली, उनकी धर्मपत्नी, अन्जन र उनका श्रीमान् तारा ओली दिल्लीको अ’पोलो अस्पा’ताल पुगे मि’र्गौला प्रत्यारोपणका लागि । त्यहाँका डाक्टरले प्रभाव र दबाबमा परेर मि’र्गौला दिने लिने काम भएको त होइन भन्दै विभिन्न जाँचबुझ गरे ।
त्यहाँ गरि’बीका का’रण नेपालबाट पनि थुप्रै मि’र्गौला बेच्न जाने गरेका रहेछन् । त्यहाँका चि’कित्सकहरूले दबा’बमा परेर मिर्गौ’ला दिन लागेकी त होइन ? भन्दै आ’शंकालाई हटा’उन गरेको जाँच देखेर अन्जन निकै प्र’भावित भइन् । भिडियो रेकर्ड’सहित सबै जाँच सकिएपछि २०६४ को असारमा उनको मि’र्गाैला झिकियो र केपी ओलीको शरी’रमा प्रत्यारोपण गरियो ।
अपोलो अस्प’तालका डाक्ट’रको व्यवहार र उपचा’रशैली अजान कहिल्यै बि’र्सन सक्दिनन् । ‘एकदमै शा’लिन बोली व्य’वहार । डा’क्टर त त्यस्ता पो हुनुपर्छ त’, उनले भनिन, ‘उनीहरूको व्यव’हारले त बि’रामी पनि औ’षधिबिना नै निको हुँदो रहेछ ।’ मि’र्गौला दान गर्न जाँदा छोरा अर्पण १५ महिनाको मात्रै थियो । उनले आमाको जिम्मा छोरा छोडेर गएकी थिइन् । छोराको माया, डाक्टरको व्य’वहार र आफ्नो आ’त्मबलले मि’र्गौला दान गरेको सात दिनमात्रै अ’न्जन अपोलो अस्प’तालमा बसिन् । त्यसपछि कहिल्यै मि’र्गौला दिएका का’रण अस्प’ताल पु’ग्नु नपरेको उनले सुनाइन् ।
आफ्नै भाइबुहारीले आँट गरेर मि’र्गौला दान गरेर आफूलाई बचाएकोमा केपी पनि खुसी भए । ‘मानिसमा अनेकथरी भ्रम छ, अन्जनले भनिन, ‘ मिर्गौला दिएर केही फरक नपर्ने रहेछ, एउटा हुनु र दुईटा हुनुमा कुनै अन्तर हुँदैन । मि’र्गौला दान गरेको चार वर्षपछि अन्जनले छोरी अभिलाषा जन्माइन् । मानिसमा मा’नसिक चि’न्ता र ड’रले अ’नेक स’मस्या आउन सक्ने उनको बुझाइ छ ।
Previous आलमको भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरी त’नावमा
Next भारतको मु’म्बईमा एक नेपालीको ह:त्या !